राजा र क्वीन्स पछि अमेरिकी राज्य नामकरण गरियो
राजा र क्वीन्सले कतिपय राज्यहरूको नामकरण गरे
अमेरिकाका सातवटा शासकहरू नामक नामका छन् - चार राजाहरूका लागि नाम दिइएको छ र तीन को क्यान्सरका लागि नाम दिइएको छ। यसमा केही पुरानो उपनिवेशहरू र अहिले के क्षेत्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र शाही नामहरू फ्रान्स र इङ्गल्याण्डको शासकहरूलाई श्रद्धा दिईएको छ।
राज्यहरूको सूची जर्जिया, लुइसियाना, मैरील्याण्ड, उत्तरी क्यारोलिना, दक्षिण क्यारोलिना, वर्जीनिया र पश्चिम वर्जीनिया समावेश छन्। के तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि कुन राजा र क्वीन्सले प्रत्येक नामलाई प्रेरित गरे?
'केरोलिनास' छ ब्रिटिश रॉयलल्टी जडहरू
उत्तर र दक्षिण क्यारोलिनासँग लामो र जटिल इतिहास छ। 13 मूल उपनिवेशहरु मध्ये दुई, उनि एकल कलोनीको रूपमा सुरू गरे तर केही समय पछि विभाजित भए किनभने यो शासन गर्न धेरै भूमि थियो।
नाम ' केरोलिना' को प्रायः राजा चार्ल्स आई इङ्गल्याण्ड (1625-164 9) को सम्मान को रूप मा ठहराया छ, तर यो पुरा तरिकाले सही छैन। वास्तवमा के हो कि चार्ल्स भनेको लैटिनमा हो 'क्यारोल' र यसले 'क्यारोलिना' प्रेरित गर्यो ।
तथापि, फ्रान्सेली एक्सप्लोरर, जेन रिबल्टले पहिले 1590 मा फ्लोरिडाको बस्ती गर्ने प्रयास गर्दा क्षेत्र क्यारोलिना भनिन्छ। त्यस समयमा, उहाँले एक क्यापसर्गको रूपमा चिनिन्छ जो अब दक्षिण क्यारोलिनामा छ। समयमा फ्रान्सेली राजा? चार्ल्स आईएक्स 1560 मा मुकुट भएको थियो।
जब ब्रिटिश उपनिवेशहरूले क्यारोलिनास मा आफ्नो बसोबास स्थापना गरे, यो चाँडै नै इंग्लैंडको राजा चार्ल्स इङ्गल्याण्डको 1694 कार्यान्वयन गरे र उनीहरूले उनको सम्मानमा नाम राखे।
जब उनको छोरा 1661 मा मुकुट ले लिया, कोलोनिहरु उनको शासन को सम्मान पनि थियो।
एक तरिका मा, केरोलिनास सबै तीन राजा चार्ल्स को श्रद्धांजलि प्रदान गर्दछ।
'जर्जिया' एक ब्रिटिश राजा द्वारा प्रेरित भएको थियो
जर्जिया मूल 13 कोलोनियहरुको एक थियो जुन संयुक्त राज्य अमेरिका भयो। यो अन्तिम उपनिवेश स्थापित भएको थियो र यो 1732 मा आधिकारिक बन्नुभयो, राजा जर्ज द्वितीयको मात्र पाँच वर्षपछि इंग्लैंडको राजा मुकुट गरियो।
नाम 'जर्जिया' स्पष्ट रूपमा नयाँ राजा द्वारा प्रेरित थियो। प्रत्ययआया प्रायः औपनिवेशिक राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्थे जब महत्वपूर्ण मानिसहरूको सम्मानमा नयाँ भूमिहरू नामकरण गरिन्थ्यो।
राजा जर्ज द्वितीय उनको लामो नाम एक राज्य बनने को देखने को लागि पर्याप्त नहीं रहयो। उहाँ 1760 मा मर्नुभयो र उनको पोता, किंग जर्ज III द्वारा सफल भएको थियो, जो अमेरिकी क्रांतिवादी युद्ध को समयमा शासन गरे।
लुइसियानाको फ्रांसीसी उत्पत्ति छ
1671 मा, फ्रांसीसी अन्वेषकहरूले उत्तरी अमेरिकाको फ्रान्सका लागि ठूलो भागको दाबी गरे । तिनीहरूले राजा लुइस XIV को सम्मान मा क्षेत्र को नाम दिए, जो 1615 देखि उनको मृत्यु सम्म 1715 मा शासन गरे।
'लुइसियाना' नाम राजाको स्पष्ट सन्दर्भको साथ सुरु हुन्छ। कलेक्टरको सन्दर्भमा वस्तुहरूको संग्रहको सन्दर्भमा प्रत्यिक्स - एआईए प्रायः प्रयोग गरिन्छ। यसैले, हामी लुइसियाना को रूप मा जोड सकते हो 'को रूप मा किंग लुइस XIV को स्वामित्व मा एक संग्रह को एक संग्रह।'
यो क्षेत्र लुइसियाना क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ र थोरै जामसनले 1803 मा खरिद गरेको थियो। कुल मिलाएर, लुइसियाना खरीद मिसिसिपी नदी र रकी पहाडहरू बीच 828,000 वर्ग माइलका लागि थियो। लुइसियाना राज्य दक्षिणी सिमाना गठन गरी 1812 मा एक राज्य बन्नुभयो।
बेलायती रानी पछि 'म्यारील्याण्ड' नामकरण गरिएको थियो
मैरील्याण्डमा पनि राजा चार्ल्स म संग सम्बद्ध छ, यस अवस्थामा, यो उनको पत्नीको लागि नाम दिइएको थियो।
जॉर्ज क्याल्व पोटोमैक को एक क्षेत्र को लागि 1632 मा एक चार्टर दिइएको थियो। पहिलो सम्झौता सेन्ट मरियमको थियो र यस क्षेत्र मारील्याण्ड नाउँ गरिएको थियो। यो सबै हेनरीटार मारिया, इङ्गल्याण्डका चार्ल्स आई रानी र फ्रान्सको राजा हेनरिक चतुर्थकी छोरीको सम्मानमा थियो।
वर्जिनी रानीको लागि 'भाइगिनस' नामकरण गरियो
वर्जीनिया (र त्यस पछि पश्चिम वर्जीनिया) 1584 मा सर वाल्टर रलेहेलद्वारा बसाइँदिएको थियो। उनले समयको अंग्रेजी राजा पछि रानी एलिजाबेथ आइ.ए. पछि यो नयाँ भूमिको नाम राखे तर उनले 'एलिजाबेथको वर्जिनिया' कसरी प्राप्त गरे?
एलिजाबेथ म 1559 मा मुकुट गरियो र 1603 मा मृत्यु भयो। उनको 44 वर्ष को रानी को समयमा, उनले कभी नहीं विवाहित गरे र उनले "वर्जिन रानी" को उपनाम कमाए। त्यसोभए वर्जिनियाले आफ्नो नाम पाएको छ, तर राजा आफ्नो कुमारीतामा साँचो थियो कि धेरै छलफल र अनुमानको कुरा हो।
किन भौगोलिक अध्ययन?
आपूर्ति र मांग मा स्थानिक अन्तरक्रिया
पृथ्वीमा धानहरूको संख्या अझ धेरै जटिल छ
क्षमता वितरण के हो?
हेडिंग्स र सबहेडिंग्स को लागि एपीए स्वरूपण
पोप बेनेडिक्ट आई
भूत शिकारको 10 आज्ञा
हिन्दू भगवान आइयाप्पा को कथा
11 सर्वश्रेष्ठ Binge-Watching कार्टूनहरू
तुलनात्मक परिचालकहरू प्रयोग गरेर पेरलमा मूल्यहरूको तुलना कसरी गर्नुहोस्
बिल्लीको आँखा रोड स्टड - पेरसी शव
कठोर सजाय ब्याफफायर्स, शोधकर्ता भन्छन्
ब्रेक फिड बुझ्न र कसरी यो रोक्न
प्रो-च्वाइस बनाम प्रो-लाइभ
अमेरिकी साहित्यको संक्षिप्त विवरण
विश्व युद्ध I / II: यूएसएस न्यू यॉर्क (बीबी -34)
सकारात्मक कार्य अवलोकन
बेस्ट रॉन स्वेन्सन उद्धरण
'ला ट्राव्वेटा' बाट गीत र अनुवाद 'ऐसियो डेल पासटोटो'
सानो कुरा: किन जर्मनहरूले तपाईंलाई बताउदैन भनेर तिनीहरूले कस्तो महसुस गर्छन्
कमेन्ट अल फट